» पुरानो सिम नफाल्नुहोस्, फसिएला !
पुरानो सिम नफाल्नुहोस्, फसिएला !
२७ फाल्गुन २०७४, आईतवार ०९:१३
काठमाडौं : भक्तपुरको सानो ठिमीमा बस्ने १८ वर्षीय राधिका श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) एक वर्षअघि एनसेलको सिमकार्ड किनेकी थिइन्। सोही नम्बर प्रयोग गरेर फेसबुक, जिमेललगायत सामाजिक सञ्जालको अकाउन्ट पनि खोलिन्। केही समयपछि उनलाई नेपाल टेलिकमको नम्बर चलाउन मन लाग्यो। उनले एनसेलको सिम फ्याँकेर एनटीसीको सीम चलाउन थालिन्।
एनसेलको सिमकार्ड धेरै समय प्रयोग नगरेकाले फोन त्यति आउँदैनथ्यो। उनले यत्तिकै एनसेल सिम फ्याँकिदिइन्, कम्पनीमा गएर ब्लक गर्न आवश्यक ठानिनन्। सिम फालेको ६ महिनासम्म खासै केही समस्या आइपरेन। उनलाई पुरानो सिमको महत्व पनि त्यति भएन। तर, सिमकार्ड फ्याँकेको सात महिना के बितेको थियो, एकदिन उनको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक भयो।
फेसबुक ह्याक भएपछि उनको अकाउन्टमा अनेकथरी पोस्टहरू आउन थाले। त्यो बेलासम्म पनि पुरानो सिमको याद थिएन। उनले फेसबुक अकाउन्ट ब्लक गर्ने धेरै प्रयास गरिन्। तर, अकाउन्ट ह्याक गरेर अर्कैले चलाउन थालिसकेको हुनाले ब्लक गर्न सम्भव भएन। अकाउन्टमा अनेकथरी पोस्ट आउन थालेपछि प्यारामाउन्टका लिगल एड्भाइजर प्रविन सुवेदीलाई घटना सुनाइन्। वकिल सुवेदीले सो घटनालाई उजुरीको रूपमा महानगरीय प्रहरी प्रभाग टेकु पुर्‍याए।
उनलाई प्रहरीले फेसबुकमा सेक्युरिटीका लागि कुन मोबाइल नम्बर र इमेल अकाउन्ट राखेको छ भनेर सोधपुछ गर्‍यो। फेसबुकमा प्रयोग गरेको एनसेल नम्बर सात महिना अगाडि नै फालिसकेको उनले प्रहरीलाई जानकारी गराइन्। लगत्तै प्रहरीले सोही नम्बरमा फोन गर्दा केटा मान्छेले फोन उठायो। प्रहरीले उसलाई तत्काल टेकुमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो। तर त्यो युवा टेकुमा उपस्थित भएन, बरु तुरुन्तै ह्याक गरेको फेसबुक अकाउन्ट ब्लक गरिदियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमअनुसार प्रयोगकर्ताले ६ महिनासम्म सिम प्रयोग नगरे कम्पनीले आफै ब्लक गर्न पाउँछ। यसरी ब्लक गरिएको सिमकार्ड दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले पुनः अर्को ग्राहकलाई प्रदान गर्छ। पीडित श्रेष्ठले ६ महिनासम्म सिमकार्ड प्रयोग नगरेपछि कम्पनीले त्यो नम्बरको सिम अर्कैलाई दिइसकेको थियो। सोही सिमको नम्बर फेसबुकमा हुँदा केटोले गलत फाइदा उठाउँदै फेसबुक ह्याक गरेर उनलाई दुःख दिइरहेको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमअनुसार प्रयोगकर्ताले ६ महिनासम्म सिम प्रयोग नगरे कम्पनीले ब्लक गर्न पाउँछ। यसरी ब्लक गरिएको सिमकार्ड दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले पुनः अर्को ग्राहकलाई प्रदान गर्छन्।
‘फेसबुक अकाउन्ट ब्लक गरेपछि हा
नेशनल लाईफ बीरगन्जद्वारा अभिकर्ता सम्मानित
साल्ट ट्रेडिङद्धारा बोनस शेयर लगानीकर्ताको खातामा
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको मोतिबिन्दुको शल्यक्रिया
राक्सिराङको दुई घरबाट डेढसय किलो गाँजा बरामद
हेटौंडा बसपार्कबाट लागूऔषधसहित बोगटी पक्राउ
बंगलादेशलाई पराजित गर्दै नेपाल समूह विजेता
२ वर्षभित्र काठमाडौंको मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बन्ने
बीमाबारे सचेतना फैलाउन ‘राष्ट्रव्यापी अभियान’ सञ्चालन हुँदै
दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बन्द गरिन्छ: सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
वैशाखमा नआउने भयो पाइपलाइनबाट पेट्रोल
मतभेद साम्य पार्न देउवाले निवासमै बोलाए बैठक
विप्लवसहित नेता, कार्यकर्ता पक्राउ गर्न ७७ जिल्लामै परिपत्र
शिखर इन्स्योरेन्सको दुई आवको साधारणसभा चैत्र ९ मा कति दिँदैछ लाभांश ?
ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्सको ६६ करोड रुपैयाँको आईपिओमा आवेदन खुल्ला, फागुन २८ भित्र नभरे नपाइने
जीवन बीमा कम्पनीहरुको मुनाफा २३ प्रतिशतले बृद्धि, कसको अवस्था कस्तो ?
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीबाट हट्दै, शेयर बजार गर्ल्याम्मै ढल्ने त होइन ?
निफ्राको शेयरमा माफियाको चलखेल, मूल्य घटाएर सर्वसाधारणको शेयर खोस्ने षडयन्त्र
दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी दर्ताको पहल, पाँच अर्बको आईपिओ
संसद बिघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नयाँ शाखा सिराहामा
अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोपावरको शेयर निष्काशनका लागि बिक्री प्रबन्धमा सिद्धार्थ क्यापिटल नियुक्ति
नेपाल लाईफको जीवन बीमा कोषमा एक खर्ब बचत, दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा कोर्यो यस्तो चित्र
सिंगटी हाइड्रोको आईपीओको आवेदन समय थपियो
चन्द्रागिरी हिल्सको पहिलो शेयर कारोबारमा पनि सेटिङ् !
ओली सरकारसँग वार्ता गर्ने बिद्रोही नेकपाको निर्णय, बिप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाइदै
पत्याउन गाह्रो, तर सबै मोडेलका आईफोन सजिलै ह्याकिङ !
महिला लघुवित्तको आईपीओ यहि साता बाँडफाँड
राइनिसी मिडिया एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित बीमा पोष्ट अनलाइन हाल परिक्षणको क्रममा रहेको छ ।
सम्पर्क नं.: ०१-४४३५००२